Iirobhothi zokurhweba ▼
Iirobhothi zokurhweba ezinikezelwe kwintengiso yegolide (xauusd).
Uhambo oluzenzekelayo lweCrypto
Irobhothi yokuthengisa enikezelwe kwimarike ye-cryptocurrency.
Ukuhambisa ngokuzenzekelayo ioyile
Irobhothi yokuthengisa enikezelwe kwimarike yeoli.
Ukuhamba ngokuzenzekelayo kwi-Forex
Iirobhothi zokurhweba ezinikezelwe kwintengiso ye-Forex.
Iirobhothi zokurhweba ezisekwe kwimpahla.
Utyalo-mali lwe-Crypto ▼
Tyala kwi-Big Data cryptocurrency.
Tyala imali kwigolide kunye nedayimani ngeecrytos zakho.
Tyala imali kwizindlu nomhlaba kunye ne-Ethereum blockchain.
Thenga, gcina kwaye ukhusele ngaphezulu kwe-250 yeemali ezixabisekileyo
Ibhlokhi kunye ne-Crypto
Tutorial Izifundo zevidiyo, ukusuka kwi-blockchain ukuya kwi-cryptocurrensets
Ulwazi olubalulekileyo malunga ne-cryptocurrency nganye
Website esemthethweni PantheraTrade
Inkqubo ye-ATG (Gold)
I-ATC Bot (Crypto)
Robot yoRhwebo ngeGolide
AutoTrade Gold 5.0 ngu irobhothi yokuthengisa Isi-Indonesian esizenzekelayo esekwe kwimarike yegolide. Ikwabizwa ngokuba yi-ATG, Goldoracle, Self Gold okanye EA Robot Gold ngabasebenzisi bayo, ijolise kwinzuzo yemihla ngemihla phakathi kwe-0,5 kunye ne-1,5% yenkunzi yakho. Awunakuze ulahlekelwe ngaphezu kwe-3% ngosuku. Le robhothi ithengisa kwimodi ye-scalping kwaye ivula kuphela indawo enye ngexesha. Ikhuselekile ngokugqibeleleyo, ukuba i-ATG 5 ibhala ilahleko, iya kuzama ukwenza inzuzo yayo emini kunye norhwebo lwesibini. Kwakhona fumanisa Uhambo oluzenzekelayo lweCrypto, irobhothi entsha yokurhweba eyenza inzuzo ye-7/7 yeentsuku kwi-Bitcoin.
Bhalisa kwi AutoTrade Gold Isifundo esihlaziyiweyo
📀 EA ATG 5 ekhoyo ukuze ukhutshelwe konke konke broker.
Ixabiso elinephepha-mvume lokurhweba nge-1 Gold
Utyalo-mali olucetyisiweyo lulonke
Kulindelwe inzuzo yenyanga
Izinto eziluncedo zerobhothi AutoTrade Gold
Lawula kwaye ulawule imali yakho kwi broker LegoMarket LCC usebenzisa i-app MetaTrader 4 ou kunye broker ngokukhetha kwakho ngokuthenga kunye nokukhuphela irobhothi kwiwebhusayithi yePansaka (inyathelo lesi-2 lesifundo esingezantsi). Nguwe kuphela onokufikelela kutyalo-mali lwakho: Ingxowa-mali yokuqala + umvuzo owenziweyo + inzala edibeneyo.
Akukho software yokuhlohla. Akukho zakhono zokurhweba ezifunekayo.
Isisombululo sokurhweba esenziwe ngu IPansaka, igxile kwimarike yegolide.
Ukusebenza kakuhle ± 15%
Umyinge wokufumana umvuzo we-15% kwimbuyekezo yenyanga.
Ngaphezulu kweminyaka emi-2 kwimeko yemarike yangempela.
Qalisa amava ubuncinci be- $ 250.
Iziphumo ezicacileyo kwisicelo sakho MetaTrader 4.
15% umvuzo / ngenyanga nge AutoTrade Gold
noRhwebo oluzenzekelayo Gold 5.0
🚧 Ingqalelo, akusekho vidiyo isebenzayo kwi-Youtube nje ngokugcinwa kwendawo Pantheratrade isekhona. Isifundo esibhalwe ngezantsi siya kuhlaziywa rhoqo.
Yiba neakhawunti yeCrypto
Iqonga elikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise ii-cryptocurrencies zakho kodwa nokondla irobhothi yakho kunye broker Imarike yeLego.
Bhalisa kwi PantheraTrade
Iqonga le-API elidibanisa i-ATG ku broker Imarike yeLego.
Thenga iphepha-mvume lakho ePansaka
Iqonga loQhagamshelwano elivumela ukuthengwa kwelayisensi yakho yobomi bonke.
Igalari yemifanekiso Autotrade Gold kwi Instagram
Ukubalwa kweengeniso ze-ATG 5.0 ngaphandle kokubandakanya inzala
Itheyibhile engezantsi iya kuthathwa njengomzekelo kwaye ayinakubonakalisa eyona nyani. Ibonisa ukuvela kwenkunzi yakho ngokwesixa-mali esibekiweyo ngokusekwe kwi ukwanda kokunyuka kwe-15% ngenyanga. Inzala yemihla ngemihla ehlanganisiweyo ayithathelwa ngqalelo kolu balo. Ukuba uyayirhoxisa umvuzo wakho nyanga zonke, kuyakuthatha malunga neenyanga ezi-6 ukubuyisela utyalo-mali lwakho lokuqala xa uthelekisa neenyanga ezi-4 ukuba awutsali nto.
+ I-300.000 yabatyali mali Iziphumo zeTGA 5
Idiphozithi: 500 €
+ ilayisensi 2 ($ 224)
Idiphozithi: 1500 €
Idiphozithi: 5000 €
+ ilayisensi 3 ($ 560)
Idiphozithi: 10000 €
⚠️ Izikhumbuzo ezibalulekileyo kunye neengcebiso kuye nawuphi na umtyali-mali
Khumbula ukuba olu lutyalo-mali oluyingozi, utyala imali ekungeyomfuneko ukuba uphile ngayo kwaye eyona njongo iphambili yakho kukubuyisela inkunzi yakho yokuqala ngokukhawuleza kangangoko ngokwesicwangciso sakho sotyalo-mali.
Umzekelo weqhinga : Ndityala imali eyi-10.000 yeedola AutoTrade Gold. Ngaphandle kokurhoxisa kwaye kwiinyanga ezi-5, kufuneka ndiphinde kabini inkunzi yam. Ngokukhawuleza ukuba ndifikelele kwi-22.000 yeedola, ndiqala ukurhoxisa i-$ 2000 rhoqo xa irobhothi iwavelisa kwiiveki ezimbalwa. Ngoko ke ndirhola kwi-$22.000 ukuya kwi-20.000 yeedola rhoqo xa ndifika kubo. Ndifumana imali yam yokuqala kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezili-9 kwaye ndivelisa ingeniso ye-$3000 ngenyanga nganye (20.000 x 15%) enkosi Autotrade Gold.
Iilayisensi ezi-5 ziyafumaneka ngokuxhomekeke kubungakanani beshishini lakho
Iilayisensi zinokuphuculwa, okt uya kuhlawula kuphela umahluko phakathi kwelayisensi yangoku kunye nephepha-mvume elifunekayo. Irobhothi ayirhwebi phantsi kwenkunzi ye-100 yeedola. Ukuba uyarhoxisa kwaye uye ngaphaya komda we-50 yeedola kwiakhawunti yakho yokurhweba, uya kuphulukana nelayisensi yakho.
umzekelo : Ilayisensi yesi-2 ilinganiselwe kwi-$5000 (inkunzi ebekiweyo + umvuzo wemihla ngemihla). Oku kuthetha ukuba ngale layisensi, xa sele ubeke imali yakho enkulu, umzekelo i-3000 yeedola kwaye wenze i-2000 yeedola kwimivuzo, uya kuba ufikelele kumlinganiselo ogunyazisiweyo we-5000 yeedola. Ukusuka apho, irobhothi yakho iya kuyeka ukurhweba. Kuya kufuneka ke ngoko ufumane inxenye yomvuzo wakho okanye uthathe ilayisenisi ephezulu. Khumbula ukuphucula phambi kokuba irobhothi ime, kungenjalo kuya kufuneka uqhagamshelane nenkxaso yobugcisa okanye uqalise ngokwenza uqhagamshelo lwerobhothi kwindawo. Inkqubo ye-ATG. Iqhosha linikezelwe kule njongo.
ngenkunzi iyonke phakathi kwe-100 kunye 500 $.
Thenga ilayisensi 1
ngenkunzi iyonke phakathi kwe-100 kunye 5.000 $.
Thenga ilayisensi 2
ngenkunzi iyonke phakathi kwe-100 kunye 30.000 $.
Thenga ilayisensi 3
ngenkunzi iyonke phakathi kwe-100 kunye 1.000.000 $.
Thenga ilayisensi 4
ngobuncinci inkunzi 1.000.000 $.
Thenga ilayisensi 5
ATG 5 Inkxaso yobuGcisa
Imibuzo rhoqo malunga Autotrade Gold 5.0
Olunye ulwazi olongezelelweyo malunga neBot yokuThengisa
Ndinemibuzo malunga AutoTrade Gold, Pantheratrade, Pansaka okanye ATG System
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga AutoTrade Gold 5.0, ndikucebisa ukuba usondele kumxhasi wakho othe ngqo. Inkxaso yobugcisa evela PantheraTrade yenziwe ngabasebenzi abangama-70. Ukuqhagamshelana nabo, kuya kufuneka uvule itikiti kwaye uchaze isicelo sakho ngokuchanekileyo ngesiNgesi kwaye uqhoboshele uncamathiselo ukuze uqondwe ngcono. Qhagamshelana nabo kuphela xa kukho ingxaki, kungenjalo fowunela umxhasi wakho. Ngeengxaki zelayisensi, qhagamshelana nenkxaso yePansaka, ngeengxaki zokuxhuma kwirobhothi yakho, khetha indawo Inkqubo ye-ATG.
Vula itikiti kwinkxaso yobugcisa RDV kwiTelegram ukulandela iindaba
Ezinye iinkxalabo nge Autotrade Gold 5.0?
Inkxaso yobugcisa evela Panthera uyasicela, njengomxhasi, ukukunceda kwiingxaki onokudibana nazo kodwa kubalulekile ukuba wenze isicelo ngokobuqu ngokuvula itikiti: https://panthera.support
Inyathelo 1 / PantheraTrade
Amanyathelo ekufuneka uwalandele ukubhalisa kwirobhothi Autotrade Gold 5
Ndincoma ukusetyenziswa kwe-a Yahoo okanye idilesi yeGmail xa ubhalisa. Abanye baye baneengxaki zokuqinisekisa nge-imeyile ngeHotmail, Live, Wanadoo, iidilesi zeLaposte...
Bhalisa kwi AutoTrade Gold 5.0
Gcwalisa iindawo ezi-5 ezifunekayo:
Ugqithiselo: urhwebo oluzenzekelayo-gold
1-Yenza igama lakho lomsebenzisi
2 - Bhala igama lakho lokuqala kunye nefani yakho
3 - Khetha ilizwe ohlala kulo
4-Faka inombolo yakho yefowuni ephathwayo
5-Faka i-imeyile yakho (ngokukhethekileyo i-Gmail)
Yamkela iMigqaliselo yeNkonzo, emva koko uqinisekise
📨 I-Autotrade isandula kukuthumelela i-password yakho. Inokutshintshwa kamva. Ukuba awukayifumani kwimizuzu emi-5, ungacela ukulibala igama eligqithisiweyo kwiphepha lokungena.
You Ukuba awunayo iakhawunti ye-cryptocurrency, ndikucebisa, ngokuUkwenza iakhawunti kwi Binance, Coinbase, Kraken... Gwema utshintshiselwano oluvimba ukuhoxiswa kwakho ngaphezu kweeyure ze-2 njenge-Crypto.com, umzekelo. Unokuthenga i-crypto Binance ngekhadi lakho letyala. Nangona kunjalo, uya kubambelela kumda wokurhoxisa olinganiselwe yibhanki yakho. Ukwenza udluliselo lwebhanki kwaye ngaloo ndlela ufake iimali ezinkulu, ungasebenzisa inkonzo ye-SEPA apha Binance.
Bhalisa kwi Binance Tutorial Binance
Ukuba inombolo yakho yefowuni sele ibhalisiwe, ungayibuyisela kwaye ubeke indawo ye-06 nge-336, ukuba uhlala eFransi. Sebenzisa uphawu lwefowuni njengethuba lesibini.
Inqanaba 2 / iPansaka
Bhalisa kwi IPansaka ukufumana ilayisensi yakho ATG 5
I-Pansaka yinkampani ephethe zonke iilayisensi zeemveliso zokurhweba ze-Autotrade. Ungalibali ukuba kufuneka ube nayoUSDT okanye Litecoin LTC kutshintshiselwano lwakho ukuthenga iphepha-mvume lakho.
Inombolo ebhaliweyo: 10110618
Igama lokuqala + Igama lokugqibela
Ikhadi lesazisi elihlaziyiweyo okanye inombolo yepaspoti
Iphasiwedi + isiqinisekiso
Gcwalisa ifom yeAkhawunti yeCrypto:
- Khetha USDT
Idilesi ye-Crypto: Bonisa idilesi yakho yediphozithi USDT
(Ethereum ERC 20 network) kuphela
Inqanaba 3 / iPansaka
Uyithenga njani okanye uyiphucule njani ilayisensi yakho imotoGold 5.0?
Kwiphepha lasekhaya lenkampani yePansaka, cofa kwithebhu Inkqubo eKhethekileyo> Thenga iphakheji yexesha elizayo kwaye ukhethe ilayisenisi ngokwesixa sorhwebo ofuna ukusifaka.
💡 Ndiyakucebisa ukuba uqale ngelayisenisi yoku-1 kunye nediphozithi ye-110 yeedola ukuze uhlalutye urhwebo lwerobhothi kunye nokukwazi kwayo ukwenza ingeniso yokungena. Unokuthi emva koko uphucule iilayisensi zakho ngokuhlawula kuphela umahluko phakathi kwazo zonke. Ke qala ngokuthenga i-Litecoin (LTC) kwi Binance Ngesixa se 250 € ngekhadi letyala.
Ukuze uhlawulele ilayisenisi yakho kwaye ubeke imali yakho kwi broker, sincoma ukuthenga nokuhlawula nge-Litecoin (LTC) ngokukhululeka kwayo, isantya kunye neentlawulo eziphantsi zokuthengiselana.
Kuthatha iyure ukuba ilayisenisi yakho isebenze usebenzisa iCoinPayment.
Inqanaba 4 / iPansaka
Ukujonga nokuhlawula iphepha-mvume lakho
Kulo mzekelo, ndikhethe ilayisenisi 2 yerobhothi ye-ATG kwi broker Imarike yeLego.
Iqhosha 1: Cofa eli qhosha ukukhetha intlawulo kwi-cryptocurrency. I-popup iya kuvula, cofa kwiqhosha le-Crypto emva koko uqinisekise.
Iqhosha lesi-2: Qinisekisa kunye ne-invoyisi yoFikelelo
Inqanaba 5 / iPansaka
Ukuhlawula iphepha-mvume lakho
Isishwankathelo sexabiso kunye neendleko kwiidola.
Emva koko ucofe iqhosha le-Coinpayment.
Inyathelo 6 / Intlawulo yemali
Intlawulo yelayisensi yakho Autotrade Gold KwiLitecoin (LTC), kunye neCoinPayment.
Gcwalisa ulwazi lwakho lokuhlawula ngasekhohlo, igama lakho lokuqala, ifani kunye nedilesi ye-imeyile (jonga ukuba akukho mpazamo kwidilesi yemeyile yakho). Ekunene, khetha i-cryptocurrency Litecoin (LTC) ngexabiso lokuthenga eliphantsi.
Okokugqibela, cofa kwindawo eluhlaza okwesibhakabhaka ngasekhohlo, phantsi kwe-imeyile, ukuqinisekisa ifom. Akukho mfuneko yokubhalisa kwi-CoinPayment ukugqiba ukuthengiselana.
Iphepha elitsha leCoinPayment liya kuvula kwaye likubonise isixa njengoIdilesi ye-LTC Litecoin (LTC) Ukuze Litecoin (LTC) Imali yokutshintshaBinance, Coinbase, njl.).
on Binance, nali ikhonkco le thenga i-Litecoin kwikhadi lebhanki.
Inyathelo 7 / Intlawulo yemali
Ukugqitywa kwentlawulo yelayisensi yakho Autotrade Gold.
Yiya kutshintshiselwano lwakho njenge Binance, yenza ukurhoxa ngqo kwiIdilesi ye-LTC iceliwe. Khumbula ukongeza i-0,001 LTC kwisixa esiceliweyo kungenjalo intengiselwano iya kwaliwa kwaye uya kubuyiselwa nge-CoinPaiement. Intlawulo iya kusetyenziswa yi-Coinpayment ngokubuyisela.
Chaza idilesi ye-LTC yomamkeli. Le yidilesi (umtya) edluliselwe kwintlawulo yemali.
Ugqithiselo kufuneka lwenziwe kusetyenziswa inethiwekhi LTC.
Bonisa isixa se-LTC ngokudibanisa 0,001 ngexabiso lokugqibela
Emva koko qinisekisa le fomu.
Uya kufumana i-imeyile yokuqinisekisa nge Binance kunye neCoinPayment ekuxelela ukuba udluliselo lube yimpumelelo. Ukuba wenze impazamo, musa ukuphaphazela! Uya kufumana i-imeyile ukuba ubuyiselwe imali kwimizuzu embalwa ngeCoinPaiment ngokuchasene neentlawulo zokuthengiselana. Jonga i-spam yakho. Kufuneka ukhankanye eyakho Idilesi yedipozithi ye-LTC.
Inyathelo 8 / Pantheratrade
Ukuvulwa kwe Iakhawunti yeMT4 ukurhweba nge Pantheratrade.
Ukuze usebenzise iirobhothi ezahlukeneyo zokurhweba ezibonelelwa yinkampani PantheraTrade, kufuneka uvule i akhawunti yeMT4 esemgangathweni. Oku kuya kubeka embindini zonke iimveliso ezenziwe zifumaneke kuwe.
Ukwenza oku, cofa kwikhonkco Iiakhawunti eziQhelekileyo > Iakhawunti yeMT4. Emva koko ucofe iqhosha Yenza iAkhawunti yeMT4
Inyathelo 9 / Pantheratrade
Guqula ifayile yakho Igama lokugqitha lexeshana ifunyenwe nge-imeyile.
Usanda kufumana igama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha lexeshana nge-imeyile. Igama lakho lomsebenzisi yiNgeno yakho yokuNgena.
Ngoku siza kutshintsha igama eliyimfihlo lethutyana.
Ukwenza oku, cofa kwikhonkco elisezantsi ngasekhohlo kwesikrini: Seta kwakhona Igama Lokungena Ngegama. Ngenisa igama lakho lokugqitha lexeshana elifunyenwe nge-imeyile kwindawo yokuqala, emva koko ngenisa igama lokugqitha elitsha kwimihlaba emibini engezantsi.
Inyathelo 10 / Pantheratrade
Yenza iakhawunti yakho Autotrade Gold.
Okokuqala, cofa kwikhonkco IiAkhawunti zeCopyTrade > iAkhawunti yeMT4. Cofa iqhosha elibhlowu phezulu ekunene: Yakha iAkhawunti entsha
khetha AutoTradeGold kwi Khetha udidi, emva koko ucofe iqhosha Yenza iAkhawunti yeMT4.
Itafile kufuneka ivele kwiphepha elitsha. Gcina iAkhawunti yakho yokuNgena yeMT4 kunye negama eliyimfihlo loMtyali-mali leMT4 likhuselekile. Ziya kuthunyelwa kuwe nge-imeyile. Ezi khowudi ziya kukuvumela ukuba ulandele urhwebo kunye neakhawunti yakho yemihla ngemihla.
Inyathelo 11 / Pantheratrade
nika eyakho KYC ukuqinisekisa iakhawunti yakho.
Ukuze uqinisekise i-akhawunti yakho, kufuneka unikezele ngesazisi esinye kwezithathu eziceliweyo (ikhadi lesazisi lesizwe, incwadi yokundwendwela okanye iphepha-mvume lokuqhuba). Qaphela, isazisi sakho akufuneki siphelelwe lixesha kungenjalo i-KYC yakho iya kwaliwa ngokuzenzekelayo.
Khetha uhlobo lwe-ID oyifunayo emva koko uthathe ifoto nge-smartphone yakho.
Faka inombolo ye-ID oyifunayo entsimini: Faka inombolo ye-ID.
Layisha ifoto yakho (ulwandiso olusebenzayo: jpg, jpeg okanye png). Ungagqithisi ubunzima be-1 Mo. Ukuze ulungise ifoto yakho ngaphambi kokuthumela, sebenzisa isayithi nguinxng.com.
Kwiphepha Update KYC, kufuneka ubone isimo sakho kwimo ye "Pending". Nika iqela ixesha Pantheratrade ukuqinisekisa isazisi sakho.
Inyathelo 12 / Pantheratrade
hlawula eyakho IVawutsha ukuqinisekisa idilesi yakho yediphozithi.
Ivawutsha yeProfayili ukubhaliswa kwedilesi yediphozithi yakho ukufumana lokuwina irobhothi. Le dilesi ingaba yi-BTC, ETH okanye USDT erc20 / trc20. Sicebisa iUSDT trc20 (trx) ngeendleko zayo eziphantsi zentengiselwano kunye nokuzinza.
Cofa kwikhonkco Iivawutsha zeProfayili emva koko kwiqhosha Thenga iVawutsha Entsha
Khetha i-crypto: ETH, BTC, USDT TRC20 okanye USDT ERC20, emva koko uqinisekise
Emazantsi ephepha, nqakraza kwiqhosha le-Manual Checkout, uya kuthunyelwa kwi-Coinpayments ukwenza intlawulo.
Inyathelo 13 / Pantheratrade
Update Update profayile.
IVawutsha yeProfayili ihlawulelwe kwaye ikhowudi yakho yeVawutsha ivela kwitheyibhile, ikholamu IVawutsha. I-KYC yakho yamkelwe. Ngoku siza kugqiba ukugcwalisa iProfayili.
Okokuqala, faka idilesi yakho USDT trc20 kunye/okanye i-erc20 emva koko uqinisekise.
Uya kufumana ikhowudi ye-OTP nge-imeyile. Le khowudi kufuneka ifakwe kwindawo yokuqala.
Kwindawo yesibini, faka ikhowudi yeVawutsha oza kuyifumana kwiphepha Ivawutsha yeProfayili, ikholamu yevawutsha. Emva koko qinisekisa.
Inyathelo 14 / PantheraTrade
Uyifaka njani imali yakho yokurhweba kwi PantheraTrade ? (1/3)
Kucingelwa ukuba iphepha-mvume likwinkqubo yokuhlawulwa.
Sibuyela kwisiza PantheraTrade ukuze ubeke imali yorhwebo kunye broker Lego Market LCC.
Cofa ku I-COPYTRADE ACCOUNTS > MT4 Deposit
Emva koko ucofe iqhosha MT4 idiphozithi eNtsha
Ngokwesiqhelo le yidipozithi yakho yokuqala PantheraTradeKodwa ukuba unqwenela ukwandisa imali eyinkunzi, kuya kufuneka ubuyele kweli nqanaba. Gcina ukhumbula ukuba isixa sedipozithi sikwaxhomekeke kukhetho lwakho lwelayisensi.
Imali eyi-US $: bonisa imali onqwenela ukuyifaka kwiidola
Khetha iAkhawunti: inombolo yeakhawunti yakho ye-ATG Gold
Jonga ibhokisi enikezelwe kwimiqathango yosetyenziso, emva koko ungenise le fomu
Inqanaba ? / PantheraTrade
Faka idipozithi yakho nge CoinUkuhlawula. (2/3)
Gcwalisa ulwazi lwakho lokuhlawula, igama lakho lokuqala, igama lokugqibela kunye nedilesi ye-imeyile.
Khetha i-Litecoin (LTC).
Okokugqibela, cofa kwindawo eluhlaza okwesibhakabhaka ngasekhohlo.
Iphepha elitsha liza kuvula kwi-CoinPayment ikubonelela ngesixa kunye nedilesi apho kufuneka ufake i-Litecoins LTC yakho.
Nceda uqaphele, le iya kuba yidilesi entsha yediphozithi. Ayizukufana nedilesi yediphozithi njengephepha-mvume lakho.
Faka idipozithi yakho kurhwebo PantheraTrade. (3/3)
Ukuphathwa ngendlela efanayo nokuthenga iphepha-mvume. Kunye Binance, yenza intlawulo kanye ngokudibanisa i-0.001 kwisixa esiceliweyo se-LTC: https://www.binance.com/fr/.../crypto/LTC.
Ngenisa idilesi ye-LTC yommkeli, leyo ikhankanywe kwintlawulo yemali.
Chaza isixa se-LTC, emva koko udibanise 0,001 ngexabiso lokugqibela.
Lindela amashumi ambalwa emizuzu. Uya kufumana i-imeyile yokuqinisekisa nge Binance kunye neCoinPayment ukukwazisa ukuba ugqithiselo lwenziwe ngokuchanekileyo.
Logama nje inkxaso yobuchwephesha boRhwebo Gold khange iqinisekise intengiselwano, ngekhe uyibone imali yakho kwi-app yakho yeMT4.
Inyathelo 13 / IPansaka / Inkqubo yeATG
Nxibelelana neNkqubo yeATG kunye nePansaka
Qhagamshela kwi-ATG System
Ukuqhagamshela ku-https://atgbot.co, sebenzisa i-imeyile efanayo kunye negama lokugqitha njengoko uvuliwe Pantheratrade.
Linda imizuzu eliqela ukuze iphepha-mvume lakho liqwalaselwe yinkqubo. Le nkqubo isebenza ekuthengeni iphepha-mvume lakho lokuqala kunye nasekuphuculeni iilayisensi zakho ezilandelayo. ICala ikuvumela ukuba udibanise iphepha-mvume elitsha kunye neakhawunti yakho yorhwebo.
uza ku fumana i-imeyile ukusuka atgbot.co (jonga kwakhona i-spam yakho).
Fumana iKhowudi yeVawutsha kunye nesazisi seVawutsha ekhoyo kwi-imeyile.
Yiya kwiwebhusayithi ye-ATG System usebenzisa iikhowudi zakho Pantheratrade kwaye uvule ilayisenisi yakho: https://atgbot.co/user/ea/activate
Khuphela uncamathisele izinto kumhlaba oceliweyo.
Bonisa kakuhle: NdineAkhawunti yoRhwebo
Khetha eyakho compte Gold
⚠️ Qinisekisa ukuba ilayisenisi yakho "iQhagamshelwe". Cofa kwiqhosha elithi "Hlaziya" ukuba kukho imfuneko de kube yile meko. Zama kwiiyure ezimbalwa kamva ukuba inethiwekhi igcwele, kungenjalo vula a ATG System itikiti inkxaso yobugcisa ukuba bavule i-ATG 5 robot yakho.
Inyathelo 14 / MetaTrader 4
Ulandela njani umvuzo wakho kwi-app MetaTrader 4 ?
IMT4 sisicelo sasimahla esikuvumela ukuba ulandele ingeniso yakho. Nokuba uku-Android okanye i-IOS, uya kuyifumana ngokulula kwiiVenkile. Jonga kakuhle ilogo, udinga inguqulo yesi-4 yeMetaTrader.
Nje ukuba ifakiwe, siya kuyiqwalasela kwiakhawunti yakho yorhwebo. Ukwenza oku, kufuneka ukuba ufumene i-imeyile evela PantheraTrade nge 4 data ebalulekileyo.
Igama Lokugqithisa: Leyo yelayisensi yakho
Iphasiwedi yomtyali mali (funda kuphela): XXXXXX
Kwi-MT4 app, cofa kwi Useto (i-icon esezantsi ekunene)> Iakhawunti entsha> Ngena ngeakhawunti esele ikhona.
Kwibhokisi yokukhangela (phezulu), bhala: LegoMarketLCC2-LIVE
Igama lomsebenzisi: Ngena (amanani). Ungazifumana kwiphepha lasekhaya le Pantheratrade (iakhawunti yeMT4).
Igama lokugqithisa: Igama loMtyali-mali (funda kuphela). Ukuba uyilahlile, zama igama lokugqitha osebenzise kulo Pantheratrade.
Inyathelo 15 / PantheraTrade
Uyirhoxisa njani imivuzo yakho kunye / okanye ikapitali yakho nangaliphi ixesha ?
Unokuhoxisa kuphela kwi-crypto ekhankanywe kwisinyathelo 2. Ukuba ubonise nayiphi na USDT kwidilesi ye-Crypto, uya kufumana USDT. Nceda uqaphele ukuba ukutsalwa imali ubuncinane $ 50 kwaye ubuninzi $ 2000 ngosuku akhawunti phantsi $ 100.000. Beyond $ 100.000 idiphozithwe (kwaye ayifunyanwanga), unako ukurhoxisa 10% inkunzi ngosuku. Bala 15 ukuba 35 $ umrhumo transaction (ngaphandle kwemali oyifunayo), kuxhomekeke kwimali ekhethiweyo.
Yenza ukurhoxa kwi PantheraTrade
Ukwenza ukurhoxa, buyela kwindawo PantheraTradenqakraza Intengiselwano> Ukurhoxa.
Khetha imali oyifakileyo kwicandelo ledilesi ye-crypto xa ubhalisa (USDT / LTC okanye enye), emva koko uqinisekise.
Umfanekiso 1-Gcwalisa ulwazi oluceliweyo:
Imithombo: Khetha nokuba yi-akhawunti yakho yeMT4 okanye iakhawunti yakho yezaphulelo. Unako kwakhona ukufumana kwi-Wallet yakho yangaphakathi (iikomishoni zokufumana abo baxhasayo).
Imali eyi-US $: imali onqwenela ukuyikhupha kwiidola
Yamkela imiqathango emva koko Qinisekisa. Uya kuhanjiswa kwiphepha elitsha kwaye kwangaxeshanye uya kufumana i-imeyile kubandakanya ikhowudi ye-OTP
Umfanekiso 2-Jonga kwaye wamkele ukurhoxa:
Emazantsi eli phepha, phinda ufake igama lokugqitha lakho PantheraTrade okanye 2FA ngaphandle kokulibala ngoku ukongeza ikhowudi (imeyile OTP). Ukuba awukayifumani, inokuphuma kwi-imeyile yakho (hotmail, yahoo...). Ukubhalisa ngeGmail akuyongxaki. Ukuba kuyimfuneko, vula itikiti kwaye ubacele ukuba batshintshe idilesi yakho yangoku kwidilesi ye-gmail.
Emva koko uqinisekise intengiselwano.
Kuya kufuneka ulinde umyinge weeyure ezingama-24 (ngaphandle kweempelaveki) ukuze imali yokurhoxiswa ifakwe kwi-Exchange yakho. Oku kuxhomekeke kumahluko wexesha phakathi kwe-Indonesia kunye nelizwe ohlala kulo.
Indlela yokuqhagamshelana nenkxaso yobugcisa Autotrade Gold ?
Ukuqhagamshelana nomnye wabantu abangama-70 abasemva kwenkxaso yobuchwephesha Pantheratrade, qhubeka ngale ndlela: soloko uguqulela umyalezo wakho esiNgesini okanye eIndonesia (gu qulela kwiGoogle ngumhlobo wakho), thetha ngokuthe ngqo kwaye uchaneke, unike ubungqina bentengiselwano (txid), yiba nobubele kwaye ube nembeko. Qhagamshelana nenkxaso ukuba kukho ingxaki, kungekhona ukubuza imibuzo. Abaxhasi, amanethiwekhi oluntu kunye neeforamu banale njongo. Musa ukuthumela imiyalezo emininzi, ayinamsebenzi kwaye ayivumeli iingxaki ukuba zisonjululwe ngokukhawuleza, ngokuchaseneyo.
Vula itikiti lenkxaso PantheraTrade
Isihloko: Amagama ama-4 okanye ama-5 ukuchaza ingxaki yakho
Khetha iSebe: Inkxaso yeAkhawunti / ezeMali / iNethiwekhi
Khetha udidi: Ukhetho luxhomekeke kumhlaba ongentla.
Umyalezo: Chaza ingxaki yakho ngesiNgesi okanye ngesi-Indonesia
Ikhonkco lomfanekiso: Ikuvumela ukuba ungeze ifoto echazayo
Thumela umyalezo wakho.
Impendulo iya kuthunyelwa kuwe ngaphakathi kweeyure ezingama-24 (ngaphandle kweempelaveki). Linda.
Ungathanda umxhasi irobhothi ATG ukusuka PantheraTrade ?
Ukuba nawe ufuna ukudlulisela abahlobo kwaye ubanike inzuzo yenyanga ejikeleze i-15%, kuya kufuneka ukuba ubonelele ngekhonkco lakho lokudlulisela elibekwe kwiphepha. Intsebenziswano> Ideshibhodi
I-URL oza kuyithumela xa uthunyelwa iya kujongeka ngoluhlobo: https: //pantheratradelive / irejista /? r = IB ...
Indima ye yinyani yenyani Kukukhokela kunye nokucebisa ngamnye wabantwana bakhe bexesha elizayo, ukusuka kubhaliso ukuya ekubuyiseleni umvuzo, ukusuka kugqithiso lwebhanki ukuya kwi-cryptocurrency, echaza umngcipheko, ethatha ixesha kwinkxaso yobuchwephesha ... ube kwibhunga kunye ububele.
Iikomishini zenkxaso Autotrade Gold
Iingcebiso zokungena kubasebenzisi abadala be Pantheratrade
Kubatyali-mali ababhalise kwi Pantheratrade ngaphambi kwe-18 kaMatshi 2022 kwaye ngubani onqwenela ukuqhagamshela kuguqulelo olutsha lwe Pantheratrade.
Yiya kwiphepha: https://live.pantheratrade.tech
Ngenisa idilesi ye-imeyile yokungena kwiakhawunti yakho endala PantheraTrade emva koko ucofe iqhosha lokuqinisekisa.
Uza kufumana nge-imeyile igama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha lakho lethutyana eliza kufuneka lidityaniswe kweli phepha: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
⚠️ Ukuba awuyifumani le imeyile, landela la manyathelo:
Yiya kwiphepha: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
Cofa kwi Ulibele Igama Lokugqithisa
Bhala igama lakho lomsebenzisi
Igama lomsebenzisi olityelweyo kunye negama lokugqitha kwiPansaka
Yabantu ababhalisile kwi AutoTrade Gold phambi kukaSeptemba 1, 2021, usenokungazifumani iinkcukacha zakho zokungena ngePansaka nge-imeyile. Nasi isisombululo sokubamkela:
Ukuqhagamshela kwi-backoffice: https://pansaka.co.id/panel/login.php
Cofa kwikhonkco: Ingaba uyilibele iphasiwedi yakho?
Uya kufika kwelinye iphepha.
Cofa kwikhonkco: Ulibale i-ID yomsebenzisi?, emva koko faka idilesi yemeyile yakho.
Uya kufumana i-imeyile yokuqala kunye ne-ID yakho yokungena. Olu luhlu lwamanani.
Buyela umva kwiphepha lokungena lePansaka: https://pansaka.co.id/panel/login.php, emva koko ucofe kwakhona kwikhonkco: Uyilibele iphasiwedi? Ngokubonisa isazisi soqhagamshelo (amanani).
Uyakwazi ukufaka igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha elitsha ukudibanisa nePansaka.
Gxininisa kwi-CEO ye-Autotrade, uMnu Dinar Wahyu Saptian Dyfrig
Dinar Wahyu Kenzo ngumntu odumileyo kuluntu eIndonesia. Umtyali-mali owaziwayo, waba noxanduva lwe-IT kunye necandelo lobuchwephesha obutsha egameni lombutho we-ARTI. (Umbutho weRobhothi wokuRhweba waseIndonesia) ukubeka esweni izakhiwo zokurhweba ngokungekho mthethweni e-Indonesia kunye nombutho we-APLI olawula ukuthengiswa kwenethiwekhi ukususela ngo-1984. Indoda enentliziyo enkulu, ngenxa yeenzuzo zenkampani, iipasile zokutya ezingaphezu kwe-10 zasasazwa kubantu base-Indonesia abasweleyo ngexesha le-Covid. Ukwangumphathi weRBG inkampani encinci eNgilani, embindini we Forex, kwaye uxhasa iqela lebhola ekhatywayo laseIndonesia, elilingana neligi yoku-000 eFrance.
UDinar Wahyu Saptian Dyfrig (ophakathi) I-CEO ye-Autotrade / Pansaka kunye noBambang Soesatyo, isithethi sepalamente yase-Indonesia.
Ubhaliso ngalunye lwenziwe kwikhonkco lokudlulisela!
Kwaye kholwa ndim, ayibuhlungu kwakhona!
Akukho lula ukuqala olu hlobo lwe-adventure xa ungenalo urhwebo lwangaphambili okanye amava e-cryptocurrency. Kungenxa yoko le nto ndivumela ukuba ndikukhaphe, ukukunceda ukuseta iiakhawunti zakho phakathi kwakho broker (broker) kunye neyakho irobhothi yokuthengisa, phendula imibuzo efanelekileyo kwaye unike inkxaso yobugcisa. Ukuba awukwazi ukufumana ikhonkco elidibeneyo kwezinye iirobhothi, kungenxa yokuba andifuni ukuyikhankanya: mhlawumbi ndiyayihlola, okanye ndiyakrokra. Ukongeza, kufuneka ukwazi ukulawula inkxaso yezobuchwepheshe kunye nokuhamba kunye nokuthunyelwa kwakho ngokuchanekileyo, ngoko ke andiwuthathi umngcipheko wokukunika amakhonkco okuthumela ngaphandle kokuthintela.
Broker I-ASIC ibhalisiwe
🥇 Imizimba eyinkunzi. Ixabiso le- $ 250
🥇 Umz. ± 1300$
inkunzi enkulu. ± €50
inkunzi enkulu. ± $10
Ngaba uphulukana naluphi na ulwazi?
Ungathandabuzi ukunxibelelana nam kwi-Telegram ukuze ndikwazi ukukucebisa kwaye ndikunike uncedo lwam.
Jonga ubuqhetseba be-forex kwiwebhu
Fumanisa uluhlu lwabamnyama beenkampani ezingagunyaziswanga kunye neesayithi ezikhutshwe yi-AMF. Akukho namnye kwiirobhothi zethu okanye brokerayifakwanga.
Umsebenzi odlulileyo awunasiqinisekiso sokusebenza kwexesha elizayo.
Akukho msebenzi uphakamileyo ngaphandle komngcipheko omkhulu. Kwimarike yemasheya, ukusebenza kwexesha elidlulileyo akuthethi ukuba kuyaziphinda.
Akukho ngcebiso yotyalo-mali kule ndawo
Ukurhweba kukubeka esichengeni somngcipheko welahleko elingana needipozithi kwaye ifanelekile kuphela kubathengi abanolwazi oluphangaleleyo abanemali yokuthwala lo mngcipheko. Iziphumo ezidlulileyo azibonisi iziphumo zexesha elizayo. Undwendwe luxanduva lodwa lokusetyenziswa kolwazi olufunyenweyo kwaye luthatha zonke iingozi ezinxulumene noku kusetyenziswa. Ngokukodwa, kuya kubavakashi ukuba bathathe onke amanyathelo ayimfuneko ukugcina ingqibelelo yenkunzi yakhe. Robots-trading.fr, cryptonithe.com okanye mon-conseiller-crypto.fr kwaye abalawuli bayo abanakubekwa tyala ngayo nayiphi na ilahleko enokwenzeka.
Funda wethu Imimmisele yenkonzo bethu Umqulu wokungafihli.